Wararka Maanta: Talaado, Jun 26, 2012-Ciidamada Dowladda KMG iyo kuwa AMISOM oo saakay la wareegay Degmada Balcad ee Gobolka Shabeellada Dhexe
Taliyaha guutada koowaad ee ciidamada milateriga Soomaaliya, Jen. C/lalahi Cali Caanood ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa garabka siinaya ee AMISOM ay si nabadgalyo ah ku qabsadeen degmada Balcad ayna hadda ku wajahan yihiin degmada Jowhar.
"Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM nabadgalyo ayay ku qabsadeen degmada Balcad, haddana waxaan uga gudubnay dhinaca degmada Jowhar," ayuu yiri Jen. Caanood.
Xarakada Al-shabaab ayaa dhankeeda xaqiijisay in degmada Balcad ay gacantooda ka baxday, iyagoo sheegay inay ka dhaceen degmadaas laba qarax oo ay ku aaseen intii aysan ka bixin, kuwaasoo aysan sheegin khasaaraha ay geysteen.
"Degmada waxaa saakay la wareegay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo wata gaadiid dagaal oo ay ka mid yihiin taangiyo," ayuu yiri goobjooge ku sugan degmada Balcad oo warbaahinta la hadlay.
Ma jiraan khasaare ay dagaalladaas dhaliyeen, waxaana degmadan ay noqonaysaa degmadii labaad oo ku dhow Muqdisho oo laga qabsado xoogaga Al-shabaab, iyadoo bishii hore ay ciidamada DKMG ah iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Afgooye oo Muqdisho u jirta 30-km.
Xarakada Al-shabaab ayaa waxay u muuqataa inay dhul ballaaran luminayeen tan iyo sannadkii hore daba-yaaqadiisa oo ay ka baxeen degmooyinkii ay Muqdihso kaga sugnaayeen, iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa caawinayay dhul aanay horay u joogin isku fidinayaan.